Iipranks ezihlekisayo ezingenabungozi zokuKhula okuKhulu - Safe Pranks And Practical Jokes
Malunga Credit Cards
Iipranks ezihlekisayo ezingenabungozi zokuKhula okuKhulu
Akunyanzelekanga ukuba ube ngumntwana odlala iziqhulo ezibonakalayo kunye neeprakhikhi ezihlekisayo kubahlobo nakumalungu osapho; Abantu abadala bayathanda ukwenza ububi. Isitshixo kukuqinisekisa ukuba iprank yakho iyathandeka endaweni yokuba ibe yingozi. Kunqande ubuqhetseba obukrwada, obuyingozi, obenzakalisayo, okanye obenzakalisayo, kwaye usoloko ubagcina engqondweni abaphulaphuli bakho. La maqhinga alandelayo alungile kulonwabo oluncinci lokukhula.
Iipranks ezinxulumene nokutya ezingenabungozi
La maqhinga abandakanya ukutya okanye isiselo. Soloko uqinisekile ukuba 'ixhoba' lakho alinangxaki yokutya okanye ezinye iimeko zempilo ngaphambi kokuzama lamaqhinga.
Iifoto zoKhuseleko lweHolide yemiBhiyozo yakho
Yenza ibhetshi yeicookies ezenziwe ekhaya kwaye endaweni yeswekile, yongeza ityuwa. Pakisha ii-cookies kwiitoti ezinomtsalane okanye uzilungiselele kwisitya. Shiya isitya setafile okanye usizise endlwini yomhlobo wakho isidlo sangokuhlwa. Ungalibali ukuphatha ikhamera ukuthimba imbonakalo yobuso babantu xa beluma.
Cinezela intwana yejusi yelamuni emanzini omntu xa engajonganga. Unokongeza inani elincinci leviniga okanye ityuwa ngokunjalo. Emva koko lungela impendulo yakhe xa ethatha enye into.
ungaxelela njani ukuba umfana okwishumi elivisayo uyakuthanda
Ngobusuku obandulela ukwenza le prank, galela isiriyeli kunye nobisi kwisitya. Beka isitya kwisikhenkcezisi ebusuku. Ngentsasa elandelayo, yenza isidlo sakusasa kwaye ubeke ukutya okuziinkozo okubandayo kunye necephe phambi 'kwexhoba' lakho. Bukela kwaye wonwabe njengoko ezama ukuluma.
AmaQhinga Akhuselekileyo Ekhaya
Ezi pranks zilungile kwabo uhlala nabo kunye namalungu osapho. Qiniseka ukuba 'ixhoba' alikhawulezi ngexesha usenza ezi zinto, kuba oko kunokubangela umsindo okanye iimvakalelo ezibuhlungu.
buthini ubude obuphakathi komfazi oneminyaka eli-14 ubudala
Beka into e-gooey endlebeni okanye kwimilomo yefowuni enje ngamazinyo okanye ibhotolo yamandongomane. Sukusebenzisa itshungama njengoko oku kungabanjwa kwizinwele zexhoba kwaye akunakuhlanjwa. Qiniseka ukuba umntu akaliwa yinto ayibekayo kwifowuni. Emva koko mnike umntu umnxeba kwaye ujonge indlela asabela ngayo.
Faka isokisi okanye i-napkin ezinzwaneni zeembadada 'zexhoba'. Ukuba uziva unengxaki, thabatha umzuzwana ukwenza eli qhinga kuzo zonke izihlangu zomntu.
Iibhaluni kwigumbi lokulala
Gcwalisa igumbi lokulala 'lamaxhoba ngeebhaluni. Khetha iibhaluni ezigcwaliswe nge helium ngeyona mpembelelo intle. Kuya kufuneka urente itanki ye-helium ukukhupha eli qhinga. Xa umntu evula umnyango wegumbi lokulala, iibhaluni ziya kuphuma ziphume.
Ngelixa 'ixhoba' lilele, thepha isiqwenga sephephandaba ukusuka phezulu kwesakhelo somnyango ukuya eludongeni ngaphaya komnyango. Beka amandongomane amagwebu, ipapa, okanye iibhola ezincinci zephepha ngaphezulu kwephephandaba ngaphezulu komnyango. Xa 'ixhoba' livuka lize liphume ngomnyango, liyakunyibilikiswa ngezi zinto zilula zihamba zisiya entlokweni yalo njengoko iphepha liphuma.
Qhoboshela izigcawu ezincinci ezingeyonyani kumtya omncinci. Tape umtya ngentla kwempompo yomnyango emva koko uvale umnyango. Faka isigcawu kwisithuba esincinci phakathi komphezulu womnyango kunye nejam yomnyango. Xa ixhoba lakho livula umnyango, izigcawu ziya kuwa phantsi kwaye zibonakale ngathi ziyatsiba kuye. Lungiselela ikhamera yevidiyo ukuba ibambe indlela asabela ngayo.
IiPranks zangaphambili ezikhuselekileyo zerawn
Ukuba utyhafile, ungenza impembelelo enkulu ngokwenza ipranking ingca yomhlobo wakho ngaphambili ezinzulwini zobusuku okanye ngelixa esemsebenzini. Qiniseka nje ukuba umhlobo wakho akazothuswa lutyelelo lwakho.
Yenza iintliziyo zamaphepha amancinci kwaye uzincamathisele kwizinti zePopsicle. Thatha amakhulu kubo kwiyadi yangaphambili yexhoba ngePrank enkulu yoSuku lweValentine okanye ukubonisa uthando lwakho.
Ifom yeYard engaphambili
Thatha amakhulu eefolokhwe zeplastikhi ngaphambili kwazo. Ifolokhwe ilungile eyadini kuba ihambisa umoya emhlabeni xa ubasusa. Soloko ulungele ukunceda ukucoca iipranks zakho.
wazi njani xa inja yakho ikhulelwe
Ukuzonwabisa ngakumbi kunye nePranks ekhuselekileyo
Ezinye iipranks zigqibelele iimeko ezithile. Nokuba udlala ngobuqhophololo kwigumbi ohlala nalo ekholejini okanye pranking osebenza naye, oku kulandelayo kunokunceda.
Ngaba umhlobo wakho okanye ilungu losapho lihlala emva kwevili lemoto yakhe? Ukuba kunjalo, ungonwaba kakhulu xa usenzaImoto engenabungozi. Ukuseta ukuseta kwakhona useto ukuya ekugubungeleni imoto yomhlobo wakho kwisongelo seplastiki, uya kuyithanda le mibono imnandi nekhuselekileyo.
Ukuba uya kusebenza ngoMhla woSidenge ka-Epreli, ezi pranks zeofisi zinokubonelela ngenkuthazo enkulu. Akukho mfuneko yokulinda iholide; Ungasebenzisa la maqhinga ukwenza intsini nangaluphi na usuku enyakeni.
Nabantu abadala banokungena kulonwabo lweenkampu. Ukusuka kwiklasikhi yokubhabha ibhedi emfutshane ukuya kwisangqa sezityalo zoyilo, ezi prank zikhuselekileyo ziya konwaba.
Ikholeji lelinye ithuba elihle lokupranker ngokukhuselekileyo. Ungabambelela kwigumbi lokulala okanye wenze isebe kwezinye iintlobo zeekholeji ezikhuselekileyo zekholeji.
Xa ucwangcisa iprank, kubaluleke kakhulu ukuba uqwalasele iimvakalelo zalo mntu utsalelayo. Usenokungafuni ukutsala iprank ukuba kuya kubakho naziphi na iziphumo ezibi, ngakumbi ukuba kubandakanya ukonakaliswa kwepropathi, abantu, okanye ubudlelwane. Ngethuba nje ugcina ezi ngcamango engqondweni, wonke umntu uya kufumana iprank yakho ehlekisayo njengoko wenza.
Izinto ezimnandi zenziwe njengomntu ofikisayo
Isicwangciso Board Games Iitattoos Izilayidi Iingcaciso Zewayini Iiresiphi Ezantsi Carb
Ucoceka njani kwiitheminali zebhetri enomhlwa
kulungile ukucheba ikati
ususa njani umhlwa kwizacholo
Uyenza njani i-origami yomthi weKrisimesi ngedola yeedola
Iminyaka esemthethweni yokufumana umvambo kwi-nevada